Maxaa Ka Ogaato The Boos Railway Ticket | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Maxaa Ka Ogaato The Boos Railway Ticket
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 01/04/2021)
Maalin kasta waa hortiisa caadi ah in aad aragto kun oo rakaab ah isticmaalaya tareenada ee. Sidaa awgeed, waa layaabna ma leh, in tareenada ee loo yaqaan nolosha dalka. Haddii aan, waxay noqon karaan fowdo aad u weyn waxayna u horseedi kartaa jahwareer iyo dhibaatooyin daran.
Isagoo sheegay in, helitaanka tigidhada uu noqdo arrin mar kasta oo ay taasi dhacdo. Marka aad rabto in aad jartaan tikidhka aad, aad u baahan tahay si loo hubiyo in tikidhada waxaa laga heli karaa oo diyaar u ah.
Maxay yihiin noocyada habka ballansashada?
Waxaad ku haysataa noocyo tababarayaal ah tikidhada tikidhada tareenka. Waxay isu furnaansho yihiin. furnaansho caadi ahaan waa ugu buuxo maxaa yeelay rakaab ma jartaan tikidhka in qol this.
Intii lagu guda jiray jeer iidda, waxay noqoneysaa mid aan loo dulqaadan karin tirada dadka ku safraya tareenka waxay si sahal ah ku gaari karaan dhowr boqol. Haddii aad ka tirsan tahay dadka waayeelka ah ama aad qabto arrinta jirka ah, ka dibna fiican u tahay in Kitaabkiisa tareen rights reserved qol halkii furnaansho.
Nooca labaad ee qol waa tababaraha qarsoodiga ah. Tababaraha qarsoodiga ah sida magaca tagaa awood aad in aad isku dejiso iyo hurdo inta aad safarka. tareen kasta yimaado iyada oo ugu yaraan 10 bogies in ay yihiin tababarayaasha qarsoodiga ah.
Waxaad keeni kartaa barkin iyo sariirta sheet u gaar ah haddii aad rabto. Fiican ee kuwa u safraya on miisaaniyad. qarsoodiga ah 3 tier AC qol waa raaxo iyo wax yar ka sarreeya Tababaraha qarsoodiga ah Tareenka Ticket Boos.
wax yar ka Waxay qaalisan yihiin marka la barbar dhigo tababaraha qarsoodiga ah sababta oo ah waxay leeyihiin AC. The AC qol 2-tier waa hab kale oo safarka. waa raaxo oo waxaa idinku Arzaaqay weyn raaxada.
Isla sidaas ayaa looga dhihi karaa qaybta AC ee fasalka koowaad. Saas waxaa ugu wacan aad waxaa la siiyaa nooca gaarka ah, taas oo aad rabto in aad. Tani waa habka ugu qaalisan ee safarka. Ugu dambayn, baabuurka kursiga.
Marka aad soo safraan masaafo gaaban, markaas waxaad ku safri kartaa adigoo isticmaalaya baabuurka kursiga. Qiimaha tikidhada ayaa kayar AC-da heerka koowaad Boos tigidhada tareenka. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa si loo hubiyo in kuraasta la heli karaa iyada oo heegan SMS ama online hubi.
Isticmaalka PNR ah, aad ku hubin karnaa in aad tigidh waa jaale. Ugu dambeyntii, aad u baahan tahay si aad u aragto in kuraasta la heli karaa. Waxaad samayn kartaa in ay hubiso xaaladda PNR sax yahay ka hor inta aadan sii dhigi Tareenka Ticket Boos jaale.
Sida had iyo jeer, samayn jaale adiga oo isticmaalaya ilo lagu kalsoonaan karo macluumaadka sida Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog in your site, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fall-you-need-to-know-about-the-railway-ticket-reservation%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#boos celin tareenka tigidhada tareenada